पौने २७ अर्बको बोनस शेयर थपियो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > पौने २७ अर्बको बोनस शेयर थपियो
पौने २७ अर्बको बोनस शेयर थपियो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का उपसूचकहरुमा सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ भने जलविद्युत् समूहमा भने गिरावट भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दिन २०७५ साउन १ गते नेप्से १२०४ दशमलव ३१ को बिन्दूमा रहेको थियो । एक वर्षको अन्तरालमा नेप्से ४ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२५९ दशमलव शून्य १ को बिन्दूमा पुगेको छ ।
नेप्सेमा गत आ.व.भरीमा ९४ वटा कम्पनीको २६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको २७ करोड ३३ लाख ३२ हजार १५५ दशमलव ३८ कित्ता बोनस शेयर सूचीकत भएको छ ।
वाणिज्य बैंक उपसमूह
वाणिज्य बैंक उपसमूहमा २२ वटा कम्पनीको १८ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६५ हजार ३५६ रुपैयाँ बराबरको १८ करोड ६९ लाख १९ हजार ६५३ दशमलव ५६ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ ।
विकास बैंक उपसमूहमा २२ वटा कम्पनीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ५४ हजार ९२८ रुपैयाँ बराबर २ करोड ६८ लाख ५५ हजार ५४९ दशमलव २८ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ ।
लघुवित्त उपसमूहमा २६ वटा कम्पनीको १ अर्ब २३ करोड ९१ लाख १५ हजार ४२४ रुपैयाँ बराबर १ करोड २३ लाख ९१ हजार १५४ दशमलव २४ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ ।
जीवन बीमा उपसमूहमा पाँच वटा कम्पनीको ७३ करोड ५० लाख ५ हजार ९४ रुपैयाँ बराबर ७३ लाख ५० हजार ५० दशमलव ९४ कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत भएको छ । त्यसमध्ये एसियन लाइफले ४ प्रतिशत, सूर्या लाइफले १२ प्रतिशत, लाइफ इन्स्यारेन्सले १२ प्रतिशत, नेसनल लाइफले १३ दशमलव ५० प्रतिशत र गुराँस लाइफले ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेका थिए ।
वित्त उपसमूहमा नौ वटा कम्पनीको ६१ करोड ७६ लाख ३५ हजार ८८३ रुपैयाँ बरारबर ६१ लाख ७६ हजार ३५८ दशमलव ८३ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा जेबिल्स फाइनान्सले २ आर्थिक वर्षको बोनस शेयर एकैपटक वितरण गरेको थियो । सो कम्पनीले ३ दशमलव ५७ प्रतिशत र १ दशमलव २४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो ।
जलविद्युत उपमूहमा पाँच वटा कम्पनीको १ अर्ब २९ करोड ६९ लाख ७३ हजार ३३० रुपैयाँ बराबर १ करोड २९ लाख ६९ हजार ७३३ दशमलव ३० कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । राधी विद्युत्, सानिमा माई र बुटवल पावरले १० प्रतिशत बोनस दिएको थियो भने रिद्धि हाइड्रोपावरले ६ प्रतिशत र चिलिमेले २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेका थिए ।
होटल उपसमूहमा दुई कम्पनीको २० करोड ६७ लाख ४७ हजार ८८ रुपैयाँ बराबर ८० लाख ६२ हजार ५१७ दशमलव ५८ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा ओरियन्टल होटलले १५ प्रतिशत र सोल्टी होटलले १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो ।
अन्य र व्यापार उपसमूह
अन्य उपसमूहमा नागरिक लगानीले २२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले १० प्रतिशत र व्यापार उपसमूहमा साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनले २५ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको थियो । तीन वटा कम्पनीको १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख ७१ हजार २६६ रुपैयाँ बराबर १ करोड २२ लाख ९९ हजार ७१३ दशमलव ६६ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । (स्रोतःआर्थीक न्यूज)
२०७६ साउन १ गते १४:४५ मा प्रकाशित
शेयर बजारमा ७ खर्ब बराबरको सम्पति गुमाएका लगानीकर्तामा०७६/०७७ देखि नयाँ माहौल सिर्जना हुने आशा
आजैदेखि शुरु भयो भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम, के हो र कसरी ट्रयाकिङ गर्ने मालवाहक सवारीलाई ?
प्राधिकरणको नाममा कार्यकता पोषणः डा. महत
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरको कार्य अगाडि बढ्दै
महले भने ‘नाकाबन्दी गरेकोमा धन्यवाद छिमेकी’
भारत भ्रमणबाट फर्किए अर्थमन्त्री, के भन्छन् उनी ?